‘अब शेरबहादुर देउवाको पनि ओलीको जस्तै हालत हुन्छ’- चित्रबहादुर केसी -
प्रकाशित मिति : २०७८, ५ पुष सोमबार
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी नेपाली जनताले नचाहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरु पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएको त प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न भएको उल्लेख गरे ।
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली वहस कार्यक्रममा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एमसीसी पास गराउनको लागि विगतमा केपी शर्मा ओलीले पनि प्रयास गरेको सुनाए । कुराकानीमा उनले भने–‘पहिले खड्गप्रसाद ओलीले नै हो नि एमसीसी पास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्शीवाद लिन खोजेको त । उनी असफल भए त । अब शेरबहादुर देउवाको पनि हालत ओलीको जस्तै हुन्छ ।’ प्रस्तुत छ अध्यक्ष केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गठबन्धनमा हुनु भनेको साम्राज्यवादको एजेण्डा बोकेर देशलाई बेच्नको लागि हो र ? गठबन्धनमा सामेल भएको त प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न हो नि।
भारतलाई नचिढ्याउँदाखेरि महाकाली सन्धिलगायतका अपर कर्णालीलगायतका देशका जलस्रोत सबै बेचे यी राष्ट्रघातीहरुले, अब अमेरिकी साम्राज्यवादको गुलामी गरेर आफ्नो सत्ता र शक्तिमा बस्नको लागि चाहीँ दलाली गरिराखेका छन् । नेपाली जनताले यी दलालहरुलाई चिनिसकेका छन् । त्यसो भएको हुनाले कुनैपनि हालतमा एमसीसी पारित गर्ने कुरा मान्य हुँदैन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी पास गर्ने कुरामा सहमत हुँदैन् ।
अहिलेको बखतमा मात्रै होईन, भोलिको बखतमा पनि हाम्रो एमसीसीमा सहयोग हुँदैन।
ओहो, प्रधानमन्त्रीले त आाग्रह–महाकाली चाहीँ भारतलाई बुझाए, अपर कर्णाली बुझाए, अरु पनि कति बुझाए, कतिपय जलस्रोतहरु बुझाए, नेपालका प्राकृतिक साधन र स्रोतहरु विदेशीलाई बुझाउने, यहाँको श्रम शक्ति जति सबै अरबको खाँडीमा पुर्याउने, यस्तो लाईसेन्स चाहीँ यिनीहरुलाई नेपाली जनताले दिएका होईनन् । हाम्रो गठबन्धन चाहीँ प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न हो। अरु राष्ट्रघाती काम गर्नको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहयोग र समर्थन गर्दैन् ।
तपाईँलाई थाहा छ कि अब एमसीसी पास गराउनको लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ?
होईन, एमसीसीबारे अध्ययन गर्नको लागि कार्यदल गठन भएको छ, यसले पनि पास गराउन आग्रह गर्ला ? त्यतिवेला तपाईँहरुले के गर्ने ?
संघीयताले त देश टाट पल्टायो । ८७ जना त मन्त्री मात्रै भए प्रदेशमा । खरबौं खरबौं ऋण विदेशबाट काढेर मन्त्री पाल्ने काम भयो ? संघीयताले चाहीँ यति छिटो नै आफ्नो कुरुपता देखायो । संघीयता त धराशयी भैसक्यो । पहिलो शर्त त संघीयता त खारेजी हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा एमसीसी पनि खारेज गर्नुपर्छ । संघीयताबारे नेपाली जनताले थाहा पाईसकेका छन् । नेपाली जनतालाई संघीयता र एमसीसी दुवै मान्य छैन ।
हाम्रो पार्टी एमसीसीको पक्षमा कुनैपनि हालतमा छैन । जीत नेपाली जनताको हुन्छ ।